Pogba, Demiral, Mandzukic - Agaasimaha Ciyaaraha Juventus Oo U Duulay London & Wadahadalada Uu La Gali Doono Kooxaha Ingiriiska Oo Lasii Kashifay. - Gool24.Net
November 14, 2019 Saed Balaleti
Agaasimaha Juventus Fabio Paratici ayaa lagu soo warramayaa inuu u duulay magaalada London si uu wadahadalo ula galo kooxda Man United sida ay sheegayaan warbixino ka imaanaya talyaaniga.
Wargeyska La Stampa ee laga leeyahay magaalada Turin ayaa hoosta ka xariiqay in Paratici uu ugu duulay London kaliya inuu Red Devils kala xaajoodo arrinta ku saabsan Mario Mandzukic kaas oo la filayo inuu bisha January adduun dhan 13 Malyan oo Pound ugu wareego kooxda ka dhisan Old Trafford.
Agaasimaha wuxuu doonayaa inuu kooxda ka fogeeyo Mandzukic kaas oo aan kooxda u ciyaarin tan iyo markii uu kooxda la wareegay Maurizio Sarri, xiddiga lama tababarto kooxda inteeda kale si jirkiisa u ilaaliyo.
Dhinaca kale wakiilada Man United waxaa laga yaabaa iney agaasimaha kala hadlaan sheeko ku saabsan daafaca da’da yar ee Merih Demiral kaas oo ay wakiilo soo daawada u direen kulan u dhaxeeyay Turkey iyo Scotland.
21-jirkaan heerka caalami wuxuu kooxda kaga soo biiray dhanka Sassuolo, balse ma noqon mid la adeegsado kadib markii uu kooxda yimid Matthijs de Ligt oo qiimo sare ugu fadhiya kooxda marwada duqda ah.
Red Devils ma ahan kooxda dooneysa, sidoo kalana Arsenal ayaa isha ku heysa xiddigaan heerka caalami ee lagu tiriyo mid ka mid ah daafacyada soo koraya ee laga sheekeyn doono.
Mandzukic waa mid u dhaw inuu Old Trafford ka dago, sababtoo ah Ole Gunnar Solskjaer wuxuu raadinayaa xiddig ka saacida kooxda gooldhalinta kadib markii uu fasalkaan si xun ku bilowday.
Sidoo kale waxaa jira sheeko hoose oo ay macquul tahay iney ka hadlaan waana wax ku saabsan Paul Pogba, xiddiga dhaawaca kooxda kaga maqan ee reer France wali wuxuu jecel yahay inuu dib ugu laabto Turin.
Waxaa intaas sii dheer in Paratici laga yaabo inuu maamulka Chelsea kulan la qaato isagoo kala hadli doona sida lagu heli karo Willian iyo Palmeri kuwaas oo noqday dooqa Maurizio Sarri.